Naqshadeynta Webka: Adiga Maaha Adiga | Martech Zone
Naqshadeynta Webka: Adiga Maaha Adiga
Khamiis, Juun 23, 2009 Monday, June 2, 2014 Jon Arnold
Ma waxaad ku dhowdahay inaad qaadato naqshad websaydh weyn? Sidee ku saabsan dib-u-dhiska barnaamijkaas jilicsan-laakiin-muhiimka ah? Kahor intaadan quusin, xusuusnow in garqaadaha kama dambaysta ah ee tayada uusan adiga ahayn, waa kuwa isticmaala. Waa kuwan dhowr tallaabo oo aad si fiican ugu fahmi karto baahidooda iyo dhaqankooda ka hor intaadan qarash gareeynin barnaamijyada qaaliga ah ee doolarka ah:
Samee isticmaalahaaga cilmi baaris
Ka bilow xog kasta oo tiro ah, sida Analytics, inaad horeyba u aragto waxa adeegsadayaashaadu sameynayaan (ama aysan sameyneyn). Fahfaahin dheeri ah, waad isticmaali kartaa-tijaabin kartaa barta hadda ama softiweerka si aad u aragto indhahooda waxa ku farxa iyo waxa ka careysiiya isticmaaleyaashaada. Kala hadal asxaabtaada iibka ama adeegga macaamiisha si aad u barato arrimaha adeegsadayaasha hadda jira ee joogtada ah. Xitaa haddii xogtaan cilmi baarista ay horeyba ugu jirtay warbixin meel, samee waqti aad ku hadasho. Naxariista ka dhalatay wadahadal dhab ah oo lala yeeshay dadka godadka si dabiici ah ayey kuu qalabeyn doontaa si aad u sameysid naqshadeynta adeegsadayaasha iyo go'aamada horumarka.
Samee nooc nooc ah
Dhab ahaantii, taas samee prototypes (Jamac)? qofna ma abuuri karo nooc kaamil ah tijaabinta ugu horreysa. Laakiin taasi waa fikradda: inaad ku guuldareysato sida ugu dhakhsaha badan, sida raqiiska ah, iyo inta badan ee suurtogalka ah inaad ogaato in soo noqnoqod kastaa kugu soo dhowaado xalka mudan in la dhiso. Xaqiiqdii waad ku dhisi kartaa noocyo wax ku ool ah HTML ama Flash, laakiin Acrobat, Powerpoint, iyo xitaa warqad iyo qalin ayaa wali ah qalab aad u fiican oo fikradahaaga ku soo bandhigi kara qaab la taaban karo. Markaad sidaas sameysid, waxaad sifiican ula xiriiri kartaa, qiimeyn kartaa, iskuna tijaabin kartaa fikradahaaga. Ka hadlida imtixaanka?
Markay qaarkood ka fikiraan tijaabinta isticmaaleha, waxay maleeyaan jaakadaha shaybaarka cad iyo sabuurada. Nasiib darrose, inbadan ayaa waliba qiyaasaya dib u dhac iyo kharashyo dheeraad ah. Markii lagugu qasbay inaad kala doorato tan oo aan la tijaabin isticmaalaha, intabadan waxay doortaan kuwa dambe. Ceeb! Mashaariicda yar yar ama kuwa leh waqti adag oo adag, qaado habka dhuumaalaysiga ah: raadso 6 ilaa 10 shaqaale, waalidiinta, isqaba, deriska (qof kasta oo diyaar u ah inuu caawiyo) una ilaali si shaqsi ahaaneed markay dhameystiraan mid ama laba ka mid ah howlaha ugu muhiimsan. noocaaga. Tani kuuma siineyso dhammaan aragtida ama warbixinnada qurxoon ee tijaabada isticmaalka tooska ah ay bixiso, laakiin tijaabinta xitaa hal qof kaliya ayaa 100% ka wanaagsan tijaabinta cidna. Natiijooyinka ayaa laga yaabaa inay kaa yaabiyaan ama xitaa kaa careysiiyaan, laakiin waxay ka fiicantahay inaad waxyaalahan hadda ogaatid marka loo eego ka dib marka mashruuca si kale loo sameeyo.
Naqshadeynta saxda ah
Waa run inaan bini-aadam jecel nahay waxyaabo dhalaalaya, oo qurux badan. Tikniyoolajiyadda, iskudhafyada sida wanaagsan loo qaabeeyey ayaa loo arkaa inay ka sahlan yihiin isticmaalka kuwa aan loo qaabeyn. Tani macnaheedu maahan in mashruucaagu uu noqdo tartan qurux badan, hase yeeshe. Tusaale ahaan, ka fikir haddii naqshada shaashadda Google ay adeegsatay sawirro hodan ah iyo wareejinta shaashadda oo faahfaahsan. In kasta oo tani ay rafcaan ka qaadan karto goob kale, waxay noqon doontaa dhibaato buuxda shaashadda raadinta. Wixii Google, iyo runtii kuwa kale oo badan, ayaa ugu badan qurux badan Naqshadeynta shaashadu badanaa waa tan ugu fudud.
Waa u qalantaa
Waxaan sifiican u ognahay culeyska saaran mashruuc cusub si dhakhso leh shaqo tag wax dhisid. Waa nasiib daro markii talaabooyinka sida cilmi baarista isticmaalaha, horudhaca, iyo tijaabinta isticmaalaha ay yihiin waxyaabaha ugu horeeya ee la tagayo marka miisaaniyadaha iyo jadwalka la adkeeyo. Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in kuwani ay badanaa doonaan badbaadi waqti iyo lacag mustaqbalka fog, ugu dambayntiina waxay kaa ilaalinaysaa inaad si kama 'ah u dhisto qaab aad ufiican oo muuqaal ah oo aan shaqeynin.
Tags: designkhibrada isticmaalahanaqshadeynta adeegsadahauxdesign web
Jon Arnold waa aasaasaha iyo madaxweynaha Tuitive, a naqshadeynta adeegsadaha shirkad ka dhigaysa barnaamijyada shabakadaha iyo moobiilkuba kuwa adeegsada-saaxiibtinimo badan (oo aad u qurux badan sidoo kale!)
Hooyada Dhamaanba Macluumaadka
WordPress: Ku dar Macluumaadka Qoraha ee Sidebar
Jul 23, 2009 markay tahay 9:41 PM
Jul 23, 2009 markay tahay 10:35 PM
Ma Dougy! Qoraalkan waxaa qoray saaxiibkeen Jon Arnold oo ka socda Tuitive - oo ah hay'ad fantastik ah oo ku taal magaalada oo ku takhasustay dhismaha naqshadaha websaydhka cajiibka ah ee kordhiya khibrada isticmaalaha.
Jul 24, 2009 markay tahay 2:54 PM
Taasi ma ahan inay ahaato mid aad u adag in loo rogo qalab dhab ah.
Jul 24, 2009 markay tahay 3:16 PM
Horeba uga shaqeynayay, Dave! :) Waxaa laga soo diray Verizon Wireless BlackBerry
Ka: Ogeysiisyada IntenseDebate